Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Nwanyị njem njem nwanyị Tanzania nwere obi ụtọ na elu
Awards • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Kpakpando njem bụ Zainab Ansell
Nwada Zainab Ansell, onye na-eme njem nlegharị anya nwanyị, ka akpọpụtara n'etiti ndị isi ọrụ Tanzania bụ ndị mere nke ọma n'etiti ndị ọgbọ na ụwa ụlọ ọrụ n'etiti ọrịa COVID-19.
Nwada Ansell pụtara dị ka naanị otu onye isi ụmụ nwanyị na-achị ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke ijeri kwuru ijeri dollar na ndepụta nke ndị isi ala 100 kachasị arụ ọrụ na Tanzania maka 2021.
Ndị ụlọ ọrụ na -ahụ maka njikwa, Eastern Star Consulting Group Tanzania matara ya.
A ga-amata ndị isi 100 kacha elu na Ọktọba 8, maka ịrụ ọrụ dị oke mkpa na-eme ka akụnụba obodo nwee ike ịmaliteghachi mgbe nsogbu COVID-19 gasịrị.
“Nwada. Zainab Ansell bụ otu n'ime ndị isi nwanyị na -enwu enwu nke oge anyị. Ọ jisiri ike jikwaa azụmaahịa ya nke ọma site na ajọ ifufe nke ọrịa COVID-19; o kwesịrị ka e too ya nke ukwuu, ”ka onye isi nọ n'ọkwa dị elu nke Eastern Star Consulting Group Tanzania, Maazị Allex Shayo kwuru.
Onu ogugu ndi isi ochichi kacha elu 100 na -achọ ịmata ma mee mmemme maka ndị isi n'otu n'otu, nwee ekele maka onyinye pụrụ iche ha nyere na akụnụba obodo, gbaa ume ọhụrụ, ma melite arụmọrụ zuru ụwa ọnụ.
N'ezie, ndakpọ akụ na ụba adaala Tanzania, n'ihi oke ikuku nke coronavirus nke kpaliri ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke azụmahịa imechi ụlọ ahịa, na -eme ka ọtụtụ nde mmadụ daa ogbenye. Mana ka nke a na-eme, Oriakụ Zainab wepụtara ngwungwu ọhụrụ dị iche iche iji dọta ndị njem nleta ụlọ, ikekwe ahịa amaghị nwoke echefuru echefu, iji mee ka ụlọ ọrụ ya dịrị ndụ n'agbanyeghị nnukwu nsogbu COVID-19. Ihe ọhụrụ ya na usoro azụmaahịa na -adigide emeela ka ọrụ dịgide ma lụso mgbanwe ihu igwe, yana kwalitere ma metụta narị narị ụmụ nwanyị ndị e kewapụrụ na mpaghara ndị ọbịa na Tanzania.
Nwada Zainab bụ onye guzobere na onye isi ụlọ ọrụ nke nọ na Tanzania Njem Zara, tọrọ ntọala ma hiwe ya na 1986 na Moshi, mpaghara Kilimanjaro, ọ na -agbasi mbọ ike iji dozie ikpe na -ezighị ezi akụkọ ihe mere eme nke mmegbu na nrigbu megide ụmụ nwanyị na mpaghara Maasai nke Northern Tanzania.
A na -enye ya otuto maka imepụta windo pụrụ iche maka inyere ụmụ nwanyị Maasai na -enweghị ike aka n'ọchịchọ ya ịtọhapụ ha site na ịda ogbenye, site n'ikike nke njigide na -emerụ ahụ nke ụkpụrụ ọdịnala ha, site na inye ha ego ka ha zụta akụrụngwa maka imepụta chaplet na nka na ire ngwaahịa ahụ. ka ndị njem nleta.
Site na etiti mmepe ụmụ nwanyị ya, ọtụtụ narị ụmụ nwanyị Maasai na -erite uru na ụlọ ọrụ njem, n'ihi na ọ na -enye ha ohere igosipụta na ire ihe ejiri aka rụọ n'okporo ụzọ gaa na saịtị ndị njem ama ama na Tanzania. Ebumnuche a etolitela bụrụ ogidi siri ike nye ụmụ nwanyị na obodo ndị ọbịa a.
Na 2009, ụlọ ọrụ ahụ wepụtara Zara Charity, na -enyeghachi obodo ndị nwere nsogbu na Tanzania ma na -eme akara ukwu ya na mmegharị ụwa maka mmepe njem nlegharị anya. Ọrụ ebere ahụ na -ekwu maka nlekọta ahụike, agụmakwụkwọ, enweghị ọrụ na nsogbu ụmụ nwanyị na ụmụaka. Zara emetụtala ọtụtụ puku ndụ na Tanzania, na -arụ ọrụ mmadụ 1,410 na -adịgide adịgide na kwa oge, na -akwado ọtụtụ puku ezinụlọ na mba nwere ọnụ ọgụgụ enweghị ọrụ dị elu.
A makwaara Zara nke ọma maka mbọ ya n'ịkwalite Sustainable Tourism Development na Africa, ebe Zainab bụ onye meriri ọtụtụ ihe nrite, ebe ọ nwetala ihe nrite iri na atọ nke mpaghara na mba. N'ime ha gụnyere Ahịa Njem Nleta ụwa (WTM) Onyinye ndị mmadụ na onye ọchụnta ego nke onyinye afọ (13), ihe ngosi njem nlegharị anya maka onyinye ọdịnihu (2012), na ụmụ nwanyị 2015 kacha mma na -eme njem. Nwanyị Zainab amatala ma nye ya onyinye maka ịbụ ụmụ nwanyị kacha nwee mmetụta na azụmaahịa na gọọmentị site n'aka CEO Global maka ihe ndị ọ rụpụtara na East Africa's Tourism and Leisure Sector 100/2018 n'oge CEO GLOBAL Pan African Awards, na Tanzania National Parks amarakwala Zara. Njem nlegharị anya dịka onye na -ahụ maka njegharị kacha mma nke mba ọwụwa anyanwụ Afrịka (2019).
Associationtù Tanzania nke Ndị na-eme njem nlegharị Onye isi ụlọ ọrụ (TATO), Maazị Sirili Akko, kwuru na mkpakọrịta ya na -enwe nganga na onye guzobere Zara Tours na onye isi maka obi mmesapụ aka ya iji kwado ndị na -enweghị ike.
Stanley kwai ekwu, sị:
September 30, 2021 na 04: 53
Mama Zara kwesịrị inweta mmeri..ọ na -enyere obodo aka n'ụzọ dị iche iche
Zainab ekwu, sị:
September 29, 2021 na 14: 23
Alice Ephata ekwu, sị:
September 29, 2021 na 13: 15
Njegharị Zara bụ mkpali nye ụwa ndị njem. N'agbanyeghị nsogbu ọrịa na -efe efe ọ kpuchiri isi ya, lee nwanyị siri ike ma dị ike.
Mama Zainab kwesịrị imeri asọmpi Big i mean Big !!!
Hery Choga ekwu, sị:
September 29, 2021 na 13: 06
Ana m ekele gị nke ukwuu mama, ị kwesịrị nke a. Anyị nwere ekele maka mbọ gị.
Dorothy ekwu, sị:
September 29, 2021 na 12: 58
Ọ bụrụ na mama a abụghị onye mmeri, ana m eche onye ọzọ ga -abụ. Vote mama Zara taa wee hapụ ya ka ọ kpalie ụwa niile na nnukwu. Mama Zara nye ụwa💫💫💫
Maisha k. Francis ekwu, sị:
September 29, 2021 na 09: 28
Ebe ị na -ekwu maka njem nlegharị anya nke Zara, ị na -ekwu maka nnukwu ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na Tanzania na mpaghara ọwụwa anyanwụ Afrịka niile. Zainabu Ansell dị ka onye isi nchịkwa bụ nwanyị siri ike ma dị ike. n'ezie, o kwesiri imeri asọmpi a
Inno Mtui ekwu, sị:
September 29, 2021 na 08: 14
N'agbanyeghị ọrịa na -efe efe ọ nwere ike nye ndị ọrụ nlegharị anya, ndị ọkpụite na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ ọrụ. Ekele dịrị mama Zara
Hosea ekwu, sị:
September 29, 2021 na 08: 11
Ọ na -akwado obodo niile gbara ya gburugburu. Ọ kwesịrị ka ọ nọrọ n'elu
Zakiah Chukwu ekwu, sị:
September 29, 2021 na 06: 53
Zainab Ansell ga -emerịrị asọmpi ahụ n'ihi na ogige mara mma nke ukwuu njem nlegharị anya Zara na -enyekwa aka ọrụ ebere